ဘယ်လ်ဂျီယံ အတွက် ကစားစဉ် မန်ယူကွင်းလယ်လူ ဖယ်လိုင်နီ ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ - Yangon Media Group
ဘယ်လ်ဂျီယံ အတွက် ကစားစဉ် မန်ယူကွင်းလယ်လူ ဖယ်လိုင်နီ ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့
မန်ယူကွင်းလယ်လူ ဖယ်လိုင်နီသည် ဘယ်လ်ဂျီယံနှင့်အတူ နိုင်ငံတကာပွဲ ကစားစဉ် ဒဏ်ရာရခဲ့ခြင်းကြောင့် လူစားလဲခံခဲ့ရကြောင်း သိရှိရသည်။ ဘယ်လ်ဂျီယံက ဘော့စနီးယားကို ၄-၃ဖြင့်အနိုင်ရခဲ့သော အဆိုပါပွဲတွင် ၁-ဝဖြင့် ဘယ်လ်ဂျီယံက အနိုင်ရချိန်၌ ဖယ်လိုင်နီမှာ ယင်းဒဏ်ရာရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဘယ်လ်ဂျီယံနည်းပြ မာတီနက်ဇ်က ဖယ်လိုင်နီ၏ဒဏ်ရာကို မိမိတို့အား လုံးစိုးရိမ်နေမိပြီး ဒူးအရွတ်စုတ်ပြဲသည့် ဒဏ်ရာအမျိုးအစား ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ကာ ၎င်း၏ဘယ် ဘက်ဒူးဒဏ်ရာအခြေအနေမှာ ကနဦးလေ့လာမှုအရ စိုးရိမ်ရနိုင်ကြောင်း ဘယ်လ်ဂျီယံ ဘောလုံးအဖွဲ့ ချုပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ယခုကဲ့သို့ ဖယ်လိုင်နီဒဏ်ရာရသည့်သတင်းက လာမည့်သီတင်း ပတ်အကုန်တွင် လီဗာပူးနှင့်ကစားရန် ရှိနေသည့်အပြင် လူကာကူ၊ ဖီးလ်ဂျုံးစ်၊ ကာရစ်၊ ပေါ့ဘာစသည့် အဓိက,ကစား သမားများဒဏ်ရာရနေသော မန်ယူအတွက် ထိုးနှက်မှုဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဆက်စပ်သတင်းအရ မန်ယူအသင်းသည် ယခုနှစ်ရာသီတွင် ခြေစွမ်းပြနေ သော ဖယ်လိုင်နီကို ၂ နှစ်စာချုပ်ဖြင့် ထပ်မံသက်တမ်းတိုးရန် စီစဉ်နေကြောင်း သိရှိရသည်။ ဖယ်လိုင်နီသည် ယခုနှစ် ရာသီတွင် မန်ယူအတွက် အရေးပါသော ကစားသမားဖြစ်နေပြီး လေးဂိုးသွင်းယူ ထားနိုင်ပြီးနောက် မန်ယူနည်းပြမော်ရင် ဟိုမှာ ၎င်းအား သက်တမ်းတိုးလိုနေ ခြင်းဖြစ်ပြီး ၂ နှစ်စာချုပ်ဖြင့် ကမ်းလှမ်း ရန်စီစဉ်နေ ကြောင်း သိရသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် မန်စီးတီးကွင်းလယ်လူ ဒီဘရူနီက ပြီးခဲ့သော ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲတွင် ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ကစားစဉ် ဆိုးရွားလှသော ဘော့စနီးယားအသင်း၏ ကွင်းအခြေအနေကြောင့် မိမိအနေဖြင့် ဒဏ်ရာရရှိမည်ကိုစိုးရိမ်မိခဲ့ကြောင်း ဖွင့်ဟခဲ့သည်။ ဒီဘရူနီသည် အဆိုပါပွဲတွင် ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက် ပွဲချိန်ပြည့်ကစားခဲ့သော်လည်း ဆိုးရွားသောကွင်းမျက် နှာပြင်ကြောင့် ဒဏ်ရာရသွားမည်ကို စိုးရိမ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီဘရူနီက ”ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဒဏ်ရာရသွားမှာကို စိုးရိမ်ခဲ့မိပါတယ်။ ကွင်းမျက်နှာပြင်အခြေအနေက လက်ခံနိုင်စရာမရှိလို့ ဒီလောက်ဆိုးရွားတဲ့ကွင်းမျိုးမှာ ဘာကြောင့် ကစားရသလဲဆိုတာ နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ရပါတယ်။ ဒီလိုဆိုးရွားတဲ့ကွင်းမျိုးမှာ ကျွန်တော် နောက်ဆုံးကစားခဲ့ဖူးတာ အသက် ၇နှစ် အရွယ်လောက်ကပါ”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ခြေချင်းဝတ် ဒဏ်ရာကြောင့် အစ္စရေးနှင့် ပွဲကို အဲလ်ကန်တာရာ လွဲချော်
”Guardians Of The Galaxy Vol. 3” ရုပ်ရှင်မှာ မင်းသား ဘရတ်ဒလေကူးပါးနဲ့ ပြန်ဆုံနိုင်တဲ့ လေဒီဂါဂါ
မိုးရာသီကာလက မြိတ်မြို့နယ်၌ မိုးစပါးများ ရေကြီး နစ်မြုပ်ခဲ့သော်လည်း ရိတ်သိမ်းချိန်တွင် အ??